HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Koreanina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
20 MARTSA 2019
Nofoanan’ny fitsarana any Khanty-Mansiysk, any Rosia, tamin’ny 7 Martsa 2019, ny didim-pitsarana navoakan’ny fitsarana ambaratonga voalohany any Sourgout, izay nanameloka ny Rahalahy Artur Severinchik. Tsy tanana am-ponja vonjimaika intsony àry izy nanomboka tamin’ny 15 Martsa.
Iray tamin’ireo rahalahy telo notanana am-ponja vonjimaika nanomboka tamin’ny 17 Febroary izy, taorian’ny bemidina natao tany Sourgout sy Lyantor. Tsy neken’ilay fitsarana anefa ny nanafahana an’i Yevgeniy Fedin sy Sergey Loginov.
Manara-maso akaiky an’io raharaha io ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Namoaka didy ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona hoe tsy maintsy jerena ny fahasalaman’ny Rahalahy Loginov, ary dokotera tsy miankina amin’ny fanjakana no tokony hanao an’izany. Niharan’ny fampijaliana ara-batana mantsy izy tany am-ponja.
Faly isika hoe nafahana ny Rahalahy Severinchik. Mivavaka foana isika mba hatoky an’i Jehovah ireo rahalahintsika migadra any Rosia. Enga anie ka ho tadidin’izy ireo foana hoe manohana azy ireo i Jehovah ka “tsy hangozohozo” mihitsy izy ireo!—Salamo 16:8.